Yaa Fashiliyey Shirkii Doorashada Looga Hadlayey? | allsanaag
Yaa Fashiliyey Shirkii Doorashada Looga Hadlayey?
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maamuladda Puntland iyo Jubaland ay diideeyn in ay dalka ka dhacdo doorasho, waxeey kalloo ku eedeeysay maamuladaas in aysan dooneeyn in la fulliyo heshiiskii 17kii September iyo kii Baydhabo lagu soo gaaray.
Hadaba hadalka maanta ka soo baxay dawladda ayaa u eg in uu fashil ku soo dhammaaday shirkii ka socday Afisiyoone, waxeeyna u muuqataa in markan dawladda ay dooneeyso in waqtiga loogu darro maadaama la isku fahmi waayey ineey qabsoonto doorashadii qabiilka.
← Shirkii Shiraac hoostiisa Shirka Anaga ma Burburin →